Ihe isii ị kwesịrị ime na Morocco | Akụkọ Njem
Morocco bu ezigbo uzo ma odighi anya na omenala, ya kpatara ya jiri di nma ma dikwa mma. Ọ bụ ebe na-aga ọtụtụ ndị Europe na-ahọrọ iji mụta banyere omenala nke ụwa Islam kachasị nso, ma n'otu oge ahụ tinye ọdịbendị ọzọ n'obodo ndị jupụtara na ihe na-atọ ụtọ ịme na ebe ị ga-eleta.
Taa, anyị ga-agwa gị isii ndị ahụ ihe ị kwesịrị ime na Morocco Ọ bụrụ n ’ịga ezumike, ịgaghị ileghara ya anya, ebe ha bụ ndị ochie. Na njem ọ bụla enwere ihe ị ga-eme na ebe ndị dị mkpa ịga leta, na-enweghị mgbaghara. Ya mere rịba ama, depụta ndepụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike itinyekwu ihe ndị masịrị gị, ma dịrị njikere ịme ihe kachasị nke njem gị na Morocco.
1 Nọrọ na Riad
2 Enwee obi uto ndi Islam
3 Gafu na medina
4 Haggle dị ka ọkachamara na souks
5 Rịọ otu abalị n'ọzara
6 Nwee tii ma smokeụọ sịga
Nọrọ na Riad
Na Morocco e nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ westernụ westernụ ndị ọdịda anyanwụ, ebe ọ bụ ebe ndị njem nleta, mana ọtụtụ ndị ọbịa na-achọ ịnọ na Riad. Riad ndị a bụ ụlọ ndị eze nwere a ọdịnala ọdịnala. Emeghachitere ha inye oghere nke enwere ime ụlọ ise ma ọ bụ karịa, yabụ ha na-abụkarị ebe nwere ọrụ ahaziri iche na obi iru ala. Houseslọ ndị a mara mma nwere ọnụ ụlọ ndị a na-achọkarị n'ụdị Moroccan, na-atọ ndị ọbịa ụtọ. Ọ dị ka anyị hụrụ onwe anyị na anyị bi n'ụlọ ndị bara ọgaranya nke Morocco. Tụkwasị na nke ahụ, ime ụlọ ndị ahụ dị gburugburu patio na-emeghe emeghe, nke a na-ahụkarị n'ụlọ ndị a, nke a na-ejikarị dị ka ebe ndị ọbịa niile na-ahụkarị. Enwere Riads dị oke ọnụ na ndị dị oke ọnụ, juputara na okomoko dịka spa na ọrụ ịhịa aka n'ahụ. Ihe niile dabere na ihe anyị chọrọ ịnwe, mana enwere ebe dị oke ọnụ ahịa ebe ị nwere ike ibi na ahụmịhe Moroccan zuru oke.
Enwee obi uto ndi Islam
Ọ bụrụ na e nwere ihe anyị hụrụ n'anya banyere Morocco, ọ na-ahụ ụlọ. Ebe dịka Koutoubía ụlọ alakụba Ha dị mkpa. Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-abụ ihe ịtụnanya inwe ike ịlele ụlọ alakụba site n'ime, mana nke bụ eziokwu bụ na imirikiti oge anyị ga-edozi maka ịhụ ha site na mpụga, ebe ọ bụ naanị ndị Alakụba ka enyere ịbanye, ebe ọ bụ na ha bụ ebe ofufe. Na-enwe mmasị n'ụkpụrụ geometric nke mosaic kachasị ahụkarị, yana ụlọ ndị dị mfe nke obodo. Ihe niile nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere ihe owuwu ụlọ anyị ji.
Gafu na medina
Medinas bụ n'ụzọ nkịtị ebe ochie nke obodo, na ha bụ ebe kachasị mmasị nleta ahụ. Old na labyrinthine alleys, ụlọ ahịa nke obere ndị ọrụ aka, madrassas, nke bụ ụlọ akwụkwọ ndị na-akụzi okpukpe Alakụba na isiokwu oge ochie, na nnukwu souks jupụtara na ụlọ nwere ihe na-adọrọ mmasị ịzụta na ụlọ nri. Obi abụọ adịghị ya na ha bụ ebe ọ ga-ekwe omume iji ụbọchị ahụ dum na-amaghị, na-efu n'etiti ndị mmadụ na n'okporo ámá, na-achọpụta akụkụ ndị na-adọrọ mmasị.
Haggle dị ka ọkachamara na souks
Souks dị ka ahịa n'èzí ebe a, anyị nwere ike ịchọta n'ime ha ụdị ọnọdụ niile. Site na ebe izu ahia nke oma rue ulo ahia ndi akpukpo aru, ebe iji zuta uwe ndi Moroccan, hookahs ma obu shishas ka anwuru anwu na otutu ihe anyi choro ka anyi soro anyi laa. Mana ebe a ka ọdịbendị na-agbanye mgbọrọgwụ gbanyere mkpọrọgwụ, ọ bụ ya mere anyị ga-eji mụta ịmụrụ ọnụ ahịa, ebe ọ bụ na ha ga-ajụ anyị maka ihe karịrị ihe ha chọrọ iwepụ. A ga-eji ọchị na nkwanye ugwu na-eme ya oge niile, ebe ọ bụ na maka ha ọ bụ akụkụ nke ọdịnala ha. Na mgbakwunye, ọ ka mma iburu ego, ebe ọ bụ na ọ bụghị ebe niile ga-akwụ ụgwọ na kaadị.
Rịọ otu abalị n'ọzara
Na Morocco e nwere ọtụtụ ndị chọrọ ibi ahụmahụ nke rahụ n’ọzara otu abalị, na maka nke a, e nwere ụlọ ahịa jaimas, ma ọ bụ ụlọ ahịa nomad, bụ ndị na-agbasakwa taa maka njem nleta. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ahụmịhe dị iche, mgbe obodo ahụ na-ekwo ekwo, mikpuo onwe gị na njem dị jụụ na mbara ọzara, ma nọrọ otu abalị n'okpuru kpakpando, na-eche anyanwụ ka ọ bilie n'elu ájá ájá.
Nwee tii ma smokeụọ sịga
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ ihe ndị Moroccan niile na-eme site n’oge ruo n’oge, ọ bụkwa oge ezumike ha, anyị nwere ike ịkekọrịta ya. Kwụsị na kọfị maka tii sitere na iko ọdịnala ma na-ese anwụrụ ụtaba sitere na shishas ma ọ bụ hookahs Ọ bụ kpochapụwo nke ndị Ọdịda Anyanwụ chọrọ ịnwale. Na mgbakwunye, n'ọtụtụ ebe, ma na riads ma na ụfọdụ ụlọ ahịa, ha na-enye gị tii dị ka nkwanye ugwu ma ọ dị mkpa ịnakwere ya dị ka ihe ngosi nke nkwanye ùgwù.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Ihe isii ị kwesịrị ime na Morocco